Xadgudubyada Shaqaalaha Ee FAVORI | Somalisan.com
Home Afsomali Xadgudubyada Shaqaalaha Ee FAVORI
Xadgudubyada Shaqaalaha Ee FAVORI,
Warbixinta FESTU Waxay Soo Bandhigtay Xadgudubyada Shaqaalaha Ee FAVORI, Dhaqanka Xididaysan ee Ku Xadgudubka Iyo Diidmada Sharciga Qaranka
Warbixinta FESTU waxay soo bandhigeysaa xadgudubyada shaqada ee ay geysato FAVORI, dhaqanka xididay ee xadgudubka iyo …
Xiriirka Ururada Shaqaalaha Soomaaliyeed (FESTU), ayaa maanta soo saaray warbixin aad u kulul oo kashifaysa xadgudubka aan xaddidneyn iyo khiyaanada ah ee xuquuqda shaqaalaha ay ku kacday FAVORI LCC, oo ah shirkadda Turkiga ee maamusha garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Abdul Abdulle International Airport.
Dhaqanka shaqada ee FAVORI wuxuu xadgudub weyn ku yahay sharciga shaqaalaha Soomaaliyeed, waxayna si toos ah uga hor imaanayaan heerarka iyo dhaqamada caalamiga ah ee shaqaalaha. Shaqaaluhu ma aha oo kaliya inay soo gaadhaan badbaado iyo caafimaad xumo xagga shaqada ah laakiin waxay sidoo kale la kulmaan caddaalad darro ay la kulanto shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Soomaaliya tan iyo 15kii Sebtember 2013.
Dalladda ay ku mideysan yihiin xoogsatada Soomaaliyeed ayaa sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeya FAVORI ay ka maqan yihiin ilaalin aasaasi ah oo sharciga waafaqsan sababta oo ah shirkadda ayaa gacansaar la leh shakhsiyaad awood ku leh siyaasadda Soomaaliya. Waxaa loo diiday inay wax ku abaabulaan urur shaqaale isla markaana lagu ciqaabo isku day kasta oo ay ku muujinayaan xuquuqdooda. Waxaa sidoo kale lagu khiyaameeyay mushaharkooda waxayna ku shaqeeyaan jawi cabsi leh.
Ciwaan looga dhigay KU xadgudubka xad dhaafka ah ee FAVORI, warbixintu waxay qortay xadgudubyo caafimaad iyo badbaado oo culus oo dhanka shaqada ah; xatooyada mushaharka iyada oo loo diidayo mushaharka shaqada la qabtay, iyada oo shaqaalaha lagu haayo addoomo u dhow iyo heerar magdhow oo aan u dhigmin xaqiiqooyinka suuqa.
Shaqaalaha sidoo kale waxaa loola dhaqmaa si ka baxsan bani’aadamnimada kuwa ku dhaawacma goobta shaqada midkoodna lama siiyo taageero caafimaad ama magdhow. Warbixinta waxaa kujira sawirro qashqashaad leh oo shaqaale ah oo laga tagay kadib dhaawacyo kasoo gaaray xubnahooda.
“FAVORI LLC waxay ku shaqeysaa ciqaab la’aan waxayna qeexaysaa musuqmaasuqa heerarka sare ee dowladda si looga fogaado la xisaabtanka. Shirkaddu waxay ka faa’iideysatay aafada COVID-19 si ay u sii xoojiso ku-takrifalkeeda iyo xeeladaha ay ku cabsi galiso shaqaalaha, ”ayuu yiri xoghayaha guud ee FESTU, Cumar Faaruuq Cusmaan.
Natiijada guud ee dhaqamadaan aan la aqbali karin ayaa ah diidmada shaqaalaha xaquuqda ay ku leeyihiin xuquuqdooda aasaasiga ah ee shaqada sida xorriyada ururada iyo gorgortanka wadajirka ah iyo waliba in lagu soo rogo dhaqamada cabudhinta iyo ladagaalanka midowga ee loogu talagalay in looga hortago abaabulka. Tani waxay sii waariday dhaqan takoorid ah oo loo geysanayo shaqaalaha – xaaladdan oo keentay kor u kaca saboolnimada shaqada, ”ayuu raaciyay.
FESTU waxay leedahay inkasta oo shirkadu kasbato faa iidooyin aad u badan, shaqaalaha FAVORI LLC waxay sii wadaan inay hoos udhacaan saboolnimada liidata sababo laxariira mushahar yar. Waxaa sidoo kale lagu qasbay inay ku shaqeeyaan xaalad khatar ah, bini’aadanimada ka baxsan oo aan la aqbali karin. Shirkaddu sidoo kale waxay si firfircoon ugu hawlan tahay hawlo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo oo lagu carqaladeeyo hawlaha ururka.
Sida laga soo xigtay FESTU, maareeyayaasha FAVORI waxay si cad ugu faaneen inay xiriir la leeyihiin shaqsiyaad awood ku leh dowladda Soomaaliya waxayna diideen inay galaan gorgortanka gorgortanka wadajirka ah iyo wadahadalka bulshada ee ay bilowday Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada (MOLSA).
Muujinta xisaabtan la’aanta, Berk Demir, oo ah Maamulaha Saldhigga FAVORI ayaa lagu soo waramayaa inuu si cad ugu sheegay shaqaalaha “Ma la shaqeyn doonno Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada maxaa yeelay waxaan haysannaa ilaalinta Wasiirka Caddaaladda Soomaaliya iyo Safaaradda Turkiga. Annagu dan kama lihin dalabyadooda. Wax kastoo ay noo soo diraan, waxaan u diraynaa Wasiirka iyo safiirkeenna si ay ula hadlaan dadka dawladda ku jira. ”
Shaqaale isku dayay inuu ku hadlo magaca shaqaalaha kale ayay shaqada ka ceyrisay FAVORI iyadoo lagu eedeeyay inuu “umeerinaayo” shaqaalaha kale sida loo sameeyo “dhaqan xumo”. Waa la ceyriyay iyadoo aan la helin digniin hore iyo dhageysi cadaalad ah. Dacwadan ayaa hada taala Maxkamada Gobolka Banaadir.
Shaqaalaha ay shaqaaleeyaan FAVORI LLC waxay dalbanayaan mushahar hufan, faa iidooyin, iyo xaalado kale oo shaqo oo hagaagsan si ay iyaga iyo qoysaskooduba ugu noolaadaan nolol fudud laakiin wanaagsan Waxay rabaan jawi shaqo oo badbaado leh oo caafimaad leh oo ka nadiif ah dhaawac, cudur, rabshad iyo dhibaatayn. Waxay rabaan mushahar isku mid ah shaqada isku qiimo ah iyadoo aan loo eegin jinsiga iyo / ama jinsiyadda. Iskusoo wada duuboo, waxay rabaan xuquuqdooda aasaasiga ah ee shaqada iyo xorriyadaha madaniga ah in si buuxda loo ixtiraamo, ”ayay FESTU ku tiri warbixinteeda.
Previous articleQarax aad jugriisa Magaalada looga maqlay iyo bolice ka oo dheemish ku tilmaamay
Next articleANSIXINTA TODOBA (7) KA MID AH SAGAALKA (9) XUBNOOD EE GOLAHA ADEEGGA GARSOORKA
Sawirada Qalabkii Ispitalka Dmartiino looga Baahnaa oo Emaaraadku Muqdisho ka dajiyey
PRESS RELEASE Japan and Austria to support private sector climate change investments on...
Imaaraadka Carabta oo marti galisay Shir ka dhan ah lana doonayo in lagu burburiyo...
Maamulka Galmudug State oo laba wariye kala dagay diyaarad garoonka Dusmareeb Sababta...